जब छोराको लोभमा सन्तानले डाँडाकाँडै ढाके ! – | Nepaliasmita:: For Latest Nepal news and updates
जब छोराको लोभमा सन्तानले डाँडाकाँडै ढाके !
पाल्पा, १३ भदौ ।
रम्भा गाउँपालिका–१, हुँगीकी सुमित्रा विकलाई आफ्नो विवाहको सम्झना छैन ।
नवौं सन्तानका रूपमा छोरा लोकबहादुर विश्वकर्माले जन्म पाएपछि नरबहादुरको परिवारमा खुशी छायो । छोरा जन्मेपछि पनि उनले अझै अर्को छोराको आशामा रहे तर छोरीलाई छोरासरह नमान्दा छोरा पाउने आशा हराउन सकेन ।
बच्चा नपाउन नरबहादुरकी श्रीमतीले दबाई खाएपछि झनै समस्या झेल्नुपर्यो । आठ महिनासम्म रगत बग्यो, नफापेर नै होला । मरिन्छ की भन्ने डरले औषधि सेवन गर्न छाडेपछि चार छोरीको जन्म फेरि भएको उनी बताउँछन् ।
स्थानीय दलित अगुवा यमबहादुर नेपालीले अहिले एक छोरा एक छोरी जन्माउने चलन बढेको बताए । छोराछोरीमा विभेद गर्ने बानीको अन्त्य हुनुपर्ने र समाजमा छोरासरह छोरीलाई मान्यता दिनुपर्ने नेपालीले बताए । –कृष्ण दर्नाल/रासस